Umntwana kunye naBantwana Sock
Emva kweminyaka eli-15 yophuhliso, u-Ubuy uye waba yenye yeesokisi ezinkulu kunye nabenzi bempahla yangaphantsi engenamthungo e-China.
Ubuy imi kwisiXeko seHaining esikufutshane neShanghai. Yinkampani yamazwe aphesheya ezinikeleyo kwaye ikhethekileyo kwiikawusi ezisemgangathweni ophezulu kunye noyilo lwempahla yangaphantsi engenamthungo kunye nemveliso.
Emva kweminyaka eli-15 yophuhliso, u-Ubuy uye waba yenye yeesokisi ezinkulu kunye nomenzi wempahla yangaphantsi engenamthungo e-China. Enkosi kubuchwepheshe bethu obuphambili
izixhobo kunye neesampulu zokuyila iinkqubo. Iimveliso zethu zokwenyani kunye noyilo zamkelwe kakuhle kwiimarike zamanye amazwe, kodwa sinokuzenza njengomthengi ngamnye
imfuneko. Iimveliso zethu zinandipha igama elihle kungekuphela e-China, kodwa nakwamanye amazwe zithandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Abathengi bethu bavela eNyakatho Melika, eYurophu, e-Australia, eJapan njl.
Ku-Ubuy awuyi kufumana kuphela iikawusi kunye nempahla yangaphantsi engenamthungo oyifunayo, kodwa kunye neqabane elinobuhlobo kwishishini, elishishina ngokulula nelinye. Sithembele kwinkonzo elungileyo kwaye injongo yethu kukuba nentembeko kubudlelwane beshishini olusekwe kwinkonzo elungileyo nomgangatho ophezulu.
Ubuy wamkela ngokufudumeleyo abathengi kwihlabathi liphela ukuba basindwendwele kwaye banike isikhokelo sokuseka intsebenziswano yeqhinga, ukwenza uthethathethwano kwezoshishino kunye nonxibelelwano oluqhubekayo.
Imveliso 1.Top esemgangathweni
2. Umthengi uyile
3. Ulawulo lweXesha elimangalisayo
4. Inkonzo ye-OEM yobungcali
Umthengisi wezinto ezinokuthenjwa, umgca wemveliso ephambili kunye nabasebenzi abanezakhono
Sineqela lethu loyilo kwaye sinokunceda abathengi ukuba bayile iikawusi kunye nezinto zangaphantsi
Sinezinto ezininzi zokuvelisa kunye neshedyuli yemveliso enengqiqo iya kulawula ixesha lesampulu kunye nokuhanjiswa
Sinamava obuchwephesha kwinkonzo ye-OEM endiyenzileyo kwiiNdawo ezininzi eziDumileyo
Igumbi617, A Ibhlokhi Tongrenjinghua NO.616 Gudun Road, Hangzhou Zhejiang China